Ndisebenzisa uAirbnb, ndiwasebenzisa njani amalungelo am angeemixholo yenkcazelo engam? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ukwenza ingasebenzi okanye ukuyicima – isihloko soncedo
Ndisebenzisa uAirbnb, ndiwasebenzisa njani amalungelo am angeemixholo yenkcazelo engam?
Ndingayivala okanye ndiyicime njani i-akhawunti yam?
Unokwenza iakhawunti yakho ingasebenzi okwethutyana uze uyenze isebenze kwakhona ngelinye ixesha okanye ungayicima ngokupheleleyo.
Ngaba i-Airbnb ingayenza ingasebenzi i-akhawunti yam?
Ewe. Funda ukuba kuxa kutheni apho uAirbnb enokubeka imiqathango, ayivale okwangoku okanye ayene ingasebenzi iakhawunti yakho.
Lungisa iisetingi zeakhawunti yakho
Ungalungisa iisetingi zeakhawunti yakho kunye nenye inkcazelo yeprofayile yakho ebonwa ngumntu wonke, kwindawo ethi Iakhawunti.